US Travel Advisories inyadzi dzepasi rose: World Tourism Network
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » US Travel Advisories inyadzi dzepasi rose: World Tourism Network
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
COVID-19 yachinja nyika. Izvi zvinofanirwa zvakare kuverenga nenzira iyo yambiro dzekufamba dzinopihwa. United States inofanirwa kunge iri yega nyika pasi rose ichirova nharaunda dzayo neZVINOGONA KUTENDA Yambiro. IUS inofanirwawo kunge iri nyika yega pasirese inosanganisira vavakidzani vane hushamwari kuenda padanho repamusoro re "musafambe" rondedzero. Hawaii-based World Tourism Network yakaburitsa chirevo chinokurudzira United States kuti igadzirise zvakare nzira yambiro dzekufambisa dzinounzwa.
Nyevero dzekufamba dzinopihwa nehurumende kuchengetedza vagari vadzo kubva pakuparwa kwemhosva, kuuraya, nehondo.
Dhipatimendi reHurumende reUS rinopa yambiro kune vagari vemuUS, uye yambiro idzi dzinokanganisa vafambi, kufamba kweboka, kufamba, uye magungano.
Kupesana neyevero yekufamba kunogona kuve, kune yekufambisa agency, cruise mutsara, kana kuronga musangano, zvakakomba zvehupfumi kana zvemutemo mhedzisiro.
The World Tourism Network (WTN) nhasi yaburitsa chirevo chekumisikidza kukurudzira iyo US State department uye US Center for Disease Control and Prevention (CDC) kuti vafunge nezvekuchinja nzira maricho ekufambisa evagari vekuUS vanofamba kuenda ku "nyika dzekunze" parizvino ari kuburitswa nekutaurwa.
"COVID-19 yachinja zvese," Sachigaro weWTN Juergen Steinmetz akadaro. “Hazvitendeseki kana nyika yakaita seBahamas kana Greece yakanyorwa muchikamu chimwe chete neAfghanistan kana North Korea. Izvi zvinonyadzisa uye zvinoita sekuseka. ”
WTN inoda kuona matatu akazvimiririra masitepisi ehurongwa hwenyika imwe neimwe yakanyorwa pane yekuraira kwekuraira runyorwa neUS State department kana CDC.
1. Kuyera kunobva pane chengetedzo uye zvisina-COVID zvine chekuita nenyaya.
2. Kuyera kunobva paCOBVID vasina-kubaiwa vafambi.
3. Kuyera kunobva kune vafambi veCOBV.
World Tourism Network iri kukurudzira kudzima Guam, Puerto Rico, uye US Islands Islands kubva pane "nyika dzekunze."
Guam, Puerto Rico, uye US Islands Islands inzvimbo dzeUS uye kwete nyika dzekunze. Vanhu vanogara imomo vagari vemuUS. Ivo vanofanirwa kubatwa senge chero imwe nyika yeUS. Kuti Hurumende yeUS ironge nyika yeU.S. ine yambiro yechina yekufamba inonyadzisa, ”akadaro Steinmetz. "Ndinoona rusaruro urwu kusaremekedza nhengo dzedu zhinji dzeUS dzinogara kuGuam."
Iyo US State department system inoziva mana mazinga eezano rekufamba:
Dzidzira Kuchengetedza Chaiko
Kudzidzira Kuwedzera Kuchenjera
Funga zvakare Kufamba
Dhipatimendi reUnited States State rakaburitsa chikamu chepamusoro cheMafambiro Ekufamba pamusoro penyika dzinotevera, ichiti kuVagari vemuUS: MUSAFAMBA kuenda kunyika dzakanyorwa.
Israel West Bank neGaza
Sangano reUS Center for Disease Control rakapa yambiro yaro yepamusoro pakurwisa nyika "dzekune dzimwe nyika" dzinotevera, richiti:
Jersey (chikamu cheUK)
Yambiro dzekufamba dzinopihwa kubva kudiki zvakanyanya - 1 kusvika pakanyanya - 4. Chiyero chechina chinoreva njodzi huru, "usaende." Parizvino, iro State State haina kusiyanisa pakati penyaya dzehutano nenyaya dzehondo nekuchengetedzeka.
Iyo inowanzo shandisa yakafara sitiroko nzira, kupenda nyika dzese dzine chiyero chakafanana uye, nekudaro, zvichikonzera mhedziso dzenhema
Iwo aripano State department mazano anopenda nzvimbo senge Afghanistan kana North Korea ine yambiro imwechete irikuitika kune nyika dzinosanganisira Bahamas kana Jamaica. Hupfumi hweBahamas uye Jamaika vimba zvakanyanya nevashanyi vekuUS.
Uye zvakare, iyo World Tourism Network inowana yazvino US Yekufamba kuraira kwakapihwa kunopesana ne US Territory Guam zvinoshamisa, zvine rusarura, uye zvinotsausa. "Dhipatimendi reUS State neCDC havana mvumo yekupa zano pamusoro pekufamba kana kupa mazano kune imwe nzvimbo kana nyika yeUS," akadaro Mary Rhodes, Mutungamiri weGuam Hotel & Restaurant Association.
COVID inoda nzira nyowani, uye panofanirwa kunge paine yambiro yekufamba inoenderana nehutsotsi uye chengetedzo, uye yechipiri seti yambiro yeCOVID. Iyi yambiro yekupedzisira inofanirwa kusiyanisa jekiseni kubva kune vasina kubayiwa uye funga kuwanikwa kwekukurumidza kuyedzwa uye serological nyore-kutonga bvunzo pakupinda nekubuda munyika.
Kubuditswa uye kusingasiyanisike kupihwa kwemazano ekufamba kunotungamira kwete chete kune nyonganiso dzehupfumi asi kudzikisira yambiro dzekufamba, rusarura, nematambudziko ezvematongerwo enyika.
IWTN inokurudzira Dhipatimendi reHurumende reUS uye maCentre for Disease Control and Prevention kuti vagadzire nzira yakasarudzika uye vashande mukugadzira kutsiga kwakanyanya kwemazano ayo ekufamba.
Chirevo cheWPN Chinzvimbo chakasainwa neMutungamiri weWTN Dr. Peter Tarlow.
Effie Fletcher anoti:
Svondo 9, 2021 pa 05: 17
Mhedziso kubvumirana uye ndinokutendai!